Obama “ Pakistan baaritaan ha ku samayso sidii uu Usama ugu qarsonaa dalkeeda. – SBC
Obama “ Pakistan baaritaan ha ku samayso sidii uu Usama ugu qarsonaa dalkeeda.
Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama ayaa ugu baaqay dowlada Pakistan in ay baaritaan ku samayso in ay jiraan Saraakiil ka tirsan Dowlada Pakistan oo ka war qabay in uu Usama Bin ladin ku dhuumanayay Magaalada Abbottabad.
Obama oo waraysi siinayay warbaahinta,gaar ahaana Taleefishinka CBS ayaa sheegay in ay suurta gal tahay in ay jiraan Saraakiil ka tirsan Dowlada Pakistan oo ka war qabay in uu Usama Bin ladin ku dhuumanayo deegaanka uu ku sugnaa kahor inta aan la dilin.
Barnaamijka 60 minutes ee ka baxa CBS ayaa Obama u sheegay in ay wax ka jiri karaan tuhunada ay muujinayaan,waxaana uu sheegay in ay kala kaashanayaan Dowlada Pakistan sidii loo xaqiijin lahaa arinkaasi,iyadoo dabagal dheeri ah la samaynayo.
Dowlada Pakistan ayaa iska fogaysay in ay jiraan wax ka war qab ah oo ay dowladoodu ka ogayd joogitaankii Allaha u naxariistee hogaamiyihii Al qacida Sheekh Usama Bin ladin deegaanka Abbutabada kahor inta aan la dilin.
“ma ogin in ay jiraan dad ku sugan gudaha Pakistan oo ka tirsan Dowlada ama ka baxsan,kuwaasi oo ka warqabay joogitaanka Usama ee gudaha dalkaasi,laakiinse waxaa jira baaritaan aanu wadna,waxaana looga baahn yahay dowlada Paksitan in ay samayso mid lamid ah baaritaankaas”waxaa mar kale hadalkaasi ku celiyay Madaxweynaha Maraykanka Brac Obama.